डर''लाग्दो खुलासा ! पोखरामा अस्पतालले विरामी नलीदा गयो ज्या'न | ड्राइभरलाई कस्ले कुटेका थिए बाटोमा ? - Public 24Khabar
Home News डर”लाग्दो खुलासा ! पोखरामा अस्पतालले विरामी नलीदा गयो ज्या’न | ड्राइभरलाई कस्ले...
डर”लाग्दो खुलासा ! पोखरामा अस्पतालले विरामी नलीदा गयो ज्या’न | ड्राइभरलाई कस्ले कुटेका थिए बाटोमा ?
लगानीकर्ता राधा पोखरेलले भने पूर्वअर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले नै सेयर बजारको लागि सुधार हुने नीतिगत विषय बनाइदिएर गएको र त्यसको परिणाम अहिले देखिन थालेको दवी गरिन् । अहिले बजार राम्रो हुनुमा वर्तमान अर्थमन्त्री भन्दा पनि पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडालाईको योगदान रहेको उनको दावी छ।
उसो त सेयर बजार बढ्नुमा कोरोनाका कारण अन्य क्षेत्रमा बन्द भएको लगानीको अवसर पनि हो । लगानीको विकल्पको रुपमा कतिपयले सेयर बजारलाई लिए । अर्कोतर्फ बैंकहरुसँग प्रशस्तै पैसा भयो र लगानीकर्तालाई लगानी गर्न रकम सहजै उपलब्ध गराउन थाले । त्यसमा पनि सस्तो ब्याजदरमा पछिल्लो केही दिनयता त बैंकहरुले ‘ब्ल्याङ्क ट्रेड’ गर्न समेत ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । यता पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले जलविद्युत र बीमामा खासै असर नपरेको देखाएको छ । सबै पक्षमा सेयरमैत्री वातावरण गर्दै गएको परिणाम पनि हो आजको रेकर्ड ब्रेक हो । बजार अब बुलिस ट्रेण्डतर्फ उन्मुख भएको र बजार अझै बढ्ने केही लगानीकर्ताको विश्लेषण छ ।
आज सेयर बजारले सबै कीर्तिमान तोडेको छ । नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैका किर्तिमानी कायम गरेको हो । साताको अनितम दिन आज बजार १८.४३ अंकले ब १८९३.३४ विन्दुमा अडिएको छ ।
आज बजार खुलेको डेढ घण्टामै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । सवा १२ बजे उच्चतम विन्दु चुमेको (१९२६.९२) बजार त्यसपछि ओरालो लाग्न थाल्यो । १ बजेर ५ मिनेटमा १९०१.७१ विन्दुमा पुगेको थियो ।
१ बजेर २० मिनेटमा १८९५ मा झरेको सेयर बजार पुन उकालो ओरालो हुँदै आज साढे सात अर्ब रुपैया भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको हो । यद्यपि बजारले रेकर्ड कायम गरेको दिन अधिकांश उपसूचक भने ओरालो लागेको छ । आज बैंकिङ समूह सबैभन्दा अगाडि छन् । आजको सेयर बजारमा २०१ कम्पनी सामेल भएका थिए ।
४ वर्ष अघि अर्थात २०७३ साउन १२ गते सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो । सो समयमा १ हजार ८ सय ८१ अंकमा पुगेर रेकर्डलाई पछि पार्दै २०७७ मंसिर ११ गते अर्को इतिहास कायम गरेको हो । रातोपाटी बाट साभार
Previous articleआफ्नै हजुरआमा श्रीम’ती छोरा छोरीलाई एक युवकले चिरपट दाउराले ब-जाए। हजुरआमा र-हिनन् अरुको अवस्था बि* जोक
Next articleविश्वका १०० महिलाभित्र पर्न सफल सपना आईन् लाईभ, एक्का’ सी के भयो यस्तो.. छिटो हेर्नुहोस् Sapana Magar